Umatshini wolwakhiwo lwePipe yoLwakhiwo lweCandelo lePipe abavelisi, abaXhasi
Ukuzinza okugqwesileyo kobushushu kunye nokumelana nobushushu ixesha elide Umbhobho unehomogeneity elungileyo kunye nokusebenza okuzinzileyo. Ukusetyenziswa kwenkqubo yamanzi ashushu kunokuqinisekisa ukusetyenziswa kweminyaka engama-50. Ukusebenza kakuhle kokusebenza kunye nomgangatho ozinzileyo wombhobho we-PE-RT akufuneki ukuba udlule kwinkqubo yokunxibelelanisa umnqamlezo, akufuneki ukuba ulawule isidanga sokunxibelelana kunye nokufana, kukho amakhonkco emveliso ambalwa, imveliso iyafana, kwaye umgangatho ezinzileyo nethembekileyo. I-Flexible kwaye kulula ukuyifaka Inokubumba ...
Intuthuzelo, ucoceko kunye nempilo ukusasazeka kobushushu yeyona ndlela yokufudumeza ilungileyo. Iqondo lobushushu langaphakathi ngaphakathi liyalingana, kwaye iqondo lobushushu kwigumbi liyehla ngokuthe ngcembe ukusuka ezantsi ukuya phezulu, ukunika abantu imvakalelo elungileyo yokufudumeza iinyawo zabo nokupholisa iintloko zabo. Akukho lula ukubangela ungcoliseko lomoya omdaka. Igumbi licoceke kakhulu, elinokuphucula ukujikeleza kwegazi lomzimba womntu kwaye likhuthaze imetabolism yomzimba womntu, ukuze yenze imeko ye-thermal ehlangabezana ...
Flame nekudodobalisa iipropati: Zombini PVC kunye PVC-C izinto babe iipropati ilangatye elungileyo nekudodobalisa kwaye inokucinywa ngoko nangoko emva komlilo. Amandla eempembelelo eziphezulu: Imibhobho yamandla e-PVC inokumelana nobunzima be-1kg kubushushu be-0 ° C kunye nefuthe lokuphakama kwe-2m, ebonisa ngokupheleleyo ukusebenza kwefuthe lobushushu obuphantsi kwemathiriyeli, esebenzayo ngokupheleleyo kwiimfuno zobume bokwakha. . Ukusebenza kwe-Insulation: Imibhobho yamandla ePVC inokumelana nemithambo ephezulu ...
Iimveliso zoluhlu lwemibhobho yamanzi ashushu nabandayo eveliswa ngokuhambelana ngokungqongqo nemigangatho ephezulu yenkqubo esemgangathweni ye-IS09001. Iimveliso ukuhlangabezana ngokupheleleyo GB / T18742.1, GB / T18742.2, GB / T18742.3 kunye GB / T17219 imigangatho yococeko. PP-R umbhobho wamanzi ashushu nabandayo yimveliso entsha esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kumazwe ahambele phambili kwihlabathi namhlanje. Isebenzisa itekhnoloji yokuhlangana ehambisanayo kwiiprojekthi zokuhambisa amanzi ashushu nabandayo. Ukusebenza kwayo kubuchwephesha kunye nezalathi zoqoqosho ...
Iipropati ezibalaseleyo zomzimba kunye neekhemikhali: Imibhobho kunye nokufakwa okwenziwe ngePVC kukunganyangeki ukubola, amandla eempembelelo eziphezulu, kunye nokuxhathisa okuphantsi kolwelo (iipesenti ezingama-30 zokuhamba okuphezulu kunemibhobho yentsimbi efanayo 6). Ubomi obudala bokuguga (ngokweenkcukacha zovavanyo ze-Ofisi yoMphathiswa Wezokwakha, ubomi benkonzo ngama-40-50), yinto efanelekileyo yokwakha umjelo wamanzi kunye nogutyulo lweekhemikhali. Ubunzima kwaye iyasebenza, kulula ukuyifaka: ubunzima yi-1/7 kuphela yobubanzi obufanayo be-cast iron pipe, ethi ...
Gcina izinto zokwenza imveliso kunye nelahleko esezantsi: i-HDPE imibhobho kunye nezilinganisi zonxibelelwano oluqhelekileyo olushushu lokunyibilika ziindibaniselwano zexesha elinye, kwaye izixhobo azinakusetyenziswa kwakhona. Indlela yoqhagamshelo lwe-groove inokudityaniswa, iinxalenye kunye nemibhobho zinokuphinda zisetyenziswe, zisebenzise ngokupheleleyo izixhobo, ukonga amandla kunye nabasebenzi kunye nezixhobo ezibonakalayo ezifunekayo kusetyenzwa lwesibini; Ngexesha lenkqubo yofakelo, imibhobho yeHDPE idityaniswe ngemilomo ethe tyaba, ngaphandle kwamalungu alelanayo. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zonxibelelwano, i ...